के विद्युत प्रधिकरणमा कुलमानको रि-इन्ट्री होला ? « Dainik Online
के विद्युत प्रधिकरणमा कुलमानको रि-इन्ट्री होला ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला चर्चामा रहेका छन् ।
चार वर्षे कार्यकाल सकिएर बिदा भएका घिसिङ चर्चामा रहेका हुन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा उनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा धेरै मानिसहरु रहेका छन् ।
घिसिङ भदौं २९ गते अर्थात आइतबार चार वर्षे कार्यकाल सकेर विदा भएका छन् । धेरैले उनको कार्यकाल थप होस् भन्ने सुभेक्षा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट राखिराखेका छन् ।
उनलाई पुन नियुक्तिको लागि दबाब दिन भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले अभियानै चलाएका छन् । कलाकार दिपकराज गिरीले त उनको पुनर्बाहलीको लागि दबाब दिन बेलुका ८ बजेबाट पाँच मिनेट बत्ती निभाउन सबैलाई आह्वान नै गरेका छन् ।
कुलमान अहिले त्यस्तो पात्र बनेका छन् जसको कामबाट खुसी बनेका नेपाली उनलाई सोही पदमा पुन ल्उन चाहिरेका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा कुलमान दुर्लभ पात्र बनेका छन् । जसको स्वभाविक बिदाईलाई धेरै नेपालीले रोक्न चाहेका छन् ।
राजनीतिक व्यक्तित्व, कर्मचारी प्रशासन, विभिन्न संस्थानका प्रमुखहरु कसैका पक्षमा पनि आम नेपालीले यति धेरै सद्भाव राखेको र पदमा कायम राखियोस् भनेर आवाज बुलन्द पारेको सम्भवत नेपालकै पहिलो घटना हो ।
तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमानलाई प्राधिरणमा तानेकी थिइन् ।
प्राधिकरणमा तानिएपछि बिनाकाम बसेका उनलाई तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशक बनेरका काम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
आफू विद्युत प्राधिकरणमा आएपछि सबैले सहयोग गरेको घिसिङ बताउँछन् ।
‘चिलिमेबाट आएर बिनाकाम बसिरहेको बेला कार्यकारी निर्देशकको रुपमा तत्कालीन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यहाँ जानु पर्यो भन्नु भयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई ल्याउनु भयो । एक खालको रिजल्ट आयो,’ घिसिङले भने,‘त्यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उर्जा संकट कसरी समाधान गर्ने भनेर एक समिति गठन गरिएको थियो त्यसको एक सदस्य म पनि थिएँ । जहाँ १० वर्षे कार्यायोजना बनाइएको थियो । त्यो बेलाको क्याबिनेटले पास गरेको थियो त्यसमा पनि मैले धेरै कुरा राखेको थिएँ ।’
आफूले सबै सरकारका पालामा सहयोग पाएको उनले बताए ।
शेरबहादुर देउवाको पालमा स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न सहयोग पाएको उनले बताए ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको पालामा उद्योगमा पनी लोडसेडिङ हटाउन सकिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्रीको पनि ठूलो समर्थन रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटदेखि धेरै कुरामा सहयोग गरेको र सामूहिक प्रयासबाट देशमा लोडसेडिङ हटाउन सकिएको उनी बताउँछन् ।
रामेछापदेखि काठमाडौंको यात्रा
रामेछापको बेथानमा २०२७ सालमा जन्मिएका घिसिङले प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै पढेका थिए । कक्षा ५ कक्षासम्म गाउँमै पढेका उनी कक्षामा सधै प्रथम हुन्थे ।
गाउँमा मट्टीतेल हालिएको टुकीको मधुरो प्रकाशमा पढेका घिसिङलाई पछि विद्युतीकरणले तान्यो । उनी विजुलीको उज्योलो गाउँगाउँमा पुराएर अध्यारो हटाउन दिनरात खटिए ।
दुई दाजुहरु काठमाडौंमा थान्काको काममा भएपछि कुलमान थप अध्ययनको लागि काठमाडौं आए ।
बालसेवा माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी गरेका उनले पछि अस्कल साइनस कलेबाट आइएसी गरे । आइएसी सकिएपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उनी भारत गए । भारतमा उनले ४ वर्षे इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेर नेपाल आए ।
मट्टितेल राखिएको टुकीको मधुरो प्रकाश मात्र देखेका उनले काठमाडौं आएपछि राति पनि दिउँसो जस्तै उज्यालो हुने बिजुली देखे ।
तीन ठाउँमा निकाले नाम
नेपाल आएसँगै उनले २०५१ सालमा जागिरको लागि तीन स्थानमा आवदेश दिए । परीक्षा दिएको मध्ये हवाइ विभाग, लोकसेवा र विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङले नाम निकाले ।
तीनै तिर लिखित र मौखिकमा नाम निकालेपनि घिसिङले आफ्नो रुची र क्षेत्रसँग मिल्ने विद्युत प्राधिरण रोजे ।
‘विषय मिल्ने भएका कारण प्राधिकरणमा ज्वाइन गरें’ कुलमान भन्छन् ।
जागिर खाँदै गर्दा उनले पुलचोक इन्जिनियरिङबाट पावर सिस्टममा मास्टर्स गरें । त्यस्तै व्यवस्थापन विषयमा पनि उनले मास्टर्स गरे । उनले जागिर गर्दै इएमबीए अध्ययन गरे ।
विद्युत प्राधिरकणमा १० औं तहमा पुगेपछि भने उनलाई नीति निर्माणको तहमा जान मन लाग्यो । त्यसपछि उनले सहसचिबमा जाँच दिए ।
एक जना माग भएको उक्त कोटाले उनले लिखितमा नाम निकाले । तर अन्तर्वार्तामा उनको नाम निक्लिएन ।
‘सहसचिबको लिखितमा दुई जनाको नाम निक्लियो जसमा एक जना म पनि थिएँ’ कुलमानले भने,‘मेरो पनि लिखितमा निस्कियो । अन्तर्वार्तामा निस्किएन । त्यो बेला निस्किएको भए अहिले सचिव हुन्थे होला ।’
कक्षासँगै जागिरमा फड्को
कुलमान पढाइमा अब्बल थिए । उनले धेरै कक्षा फड्किएका थिए । कक्षा एकबाट तीन, तीनबाट पाँच र पाँचबाट सात कक्षा फड्किएका कुलमान जागिरमा पनि भाग्यमानी सावित भए ।
७ औं तहबाट विद्युत प्राधिरणमा प्रवेश गरेका कुलमा ७ बाट ८ र९ औं नगरि १०औं तहमा फड्को मार्न सफल भए । त्यसतै ११ औं तहपछि १२ औं तह नगरि उनी कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भए ।
मोबाइलमा लोडसेडिङ एप र घरको भित्तामा लोडसेडिङ तालिका टाँसेर राखेका नेपालीले त्यही दिनदेखि कुलमानको प्रशंशा गर्न थाले ।
विजुली देखेपछि अचम्म लाग्यो
रामेछापमा जन्मिएर हुर्किएका कुलमान कक्षा पाँच पछि थप अध्ययनका लागि काठमाडौं आए । मट्टितेल राखिएको टुकीको मधुरो प्रकाश मात्र देखेका उनले काठमाडौं आएपछि राति पनि दिउँसो जस्तै उज्यालो हुने बिजुली देखे ।
‘काठमाडौंमा आएर उज्यालो देखेपछि अचम्म लाग्थ्यो । गाउँमा मट्टितेलको टुकी बालेर पढ्ने गरेको थियो । विहान उठ्दा कालो कस खोक्दा निस्किन्थ्यो’ कुलामानले आफ्नो बाल्यकाल स्मरण गर्दै भने ।
काठमाडौंमा विजुलीको उज्यालो देखेपछि उनलाई भित्रभित्रै मनमा विद्युतिकरणले एकदमै घोचिरहन्थ्यो ।
उनले इन्जिनियरिङ अध्यनका क्रममा पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा फर्म भरे । जतिबेला सिविल इन्जिनियरिङलाई राम्रो मान्ने गरिन्थो ।
‘मलाई पहिला देखिनै मन पथ्र्यो, त्यही भएर शुरुमै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा टिक लगाएँ‘ घिसिङले भने ।
विद्युत प्राधिरकणमा जागिरे भएपछि उनले नेपालका धेरै जिल्ला पुगेर विद्युतिकरणको काम गरे । उनले धेरै वर्ष विशेषत ग्रामिण विद्युतिकरणमा काम गरे ।
१८ घन्टे लोडसेडिङबाट मुक्ति
२०७३ सालको भदौंमा कुलमान विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर आउनु अघि नेपालमा दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो ।
सही व्यक्तिलाई सही स्थान भन्ने भनाइलाई सार्थक पार्दै घिसिङले आफू नेतृत्वमा आएकै वर्षको लक्ष्मी पूजामा ‘झिलिमिली बत्ती नबाल्नू’ भन्ने सूचना निकालेनन् । बरु उनी लोडसेडिङ हटाउने योजनाको परीक्षण तिर लागे । मोबाइलमा लोडसेडिङ एप र घरको भित्तामा लोडसेडिङ तालिका टाँसेर राखेका नेपालीले त्यही दिनदेखि कुलमानको प्रशंशा गर्न थाले ।
तर कुलमान भने यो आफ्नो मात्र नभएर सामूहिक प्रयासले सम्भव भएको बताउँछन् ।
‘काम गर्नका लागि एक व्यक्ति भन्दा टिम वर्क हो’ घिसिङ भन्छन्, सबैभन्दा धेरै हामीलाई जागरुक गराइरहने आम मानिस र मिडियाका कारण यो सम्भव भएको हो ।’
लोडसेडिङ मुक्न गर्ने आफूहरुले इमान्दार प्रयास गरेको घिसिङ बताउँछन् ।
१८ घन्टा भन्दा धेरै समय लोडसेडिङ हुँदा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आम मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक भएको र त्यसलाई अहिले परिवर्तन गर्न सकिएको उनी बताउँछन् ।
‘लोडसेडिङ गर्ने कर्मचारी भन्दे कुटाइखाने अवस्था थियो अहिले त्यस्तो छैन’ घिसिङले भने ।
उनले आफ्नो मात्र नभइ सबैको सहयोगबाट यो सम्भव भएको बताए ।
कयौंपटक आफ्नो टिमले राति दुई बजेसम्म काम गरेर निर्णयमा पुग्ने गरेको कुलमानले स्मरण गरे ।
‘दुई प्रधानमन्त्री र चार जना मन्त्रीसँग काम गरेको छु सबैबाट सहयोग पाएको छु । दुई जना सचिबबाट सहयोग पाएको छु’ उनले भने,‘बोर्डका सदस्यहरुबाट पनि सहयोग पाएको छु । मेरो सचिवालयका सदस्यहरुले रातको दुई बजेबसेर पनि निर्णय हुने गरेको थियो ।’
उनले आफ्ना्े नृतृत्वमा प्राधिकरणका नराम्रा मानिसलाई पनि राम्रो बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गरे ।
‘सबै सही मानिस थिए तल पनि भन्दिन तर नराम्रो लाई पनि राम्रो मान्छे बनाउने काम हामीले गरेका छौं’ उनले भने ।
उनले लोडसेडिङ हटाउनका लागि आफूहरुले चार घन्टा जति पिक आवरमा कुनै पनि उद्योगमा चलाउन नदिएको बताएं । पिकको म्यानेजमेन्ट भएपछि आम मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराले मानिसहरुलाई सहज बनाएको उनको अनुभव छ । लोडसेडिङ हुँदैछ भनेपछि वत्ति आएको बेलामा भार बढी हुने र त्यसले थप लोडसेडिङ निमत्याउने गरिएको उनी बताउँछन् त्यसलाई अब लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने कुराले विस्थापित गरिएको उनको भनाइ छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यका लागि आफूले त्यस्तो महान काम नगरेको उनी बताउँछन् ।
टेक्निकल एक्सपर्टिज, म्यानेजमेन्ट, अनियमित रुपमा भएको वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र सबभन्दा ठूलो चाँही माग पटिको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको र त्यस अनुसार काम गर्दा लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भएको उनले बताए ।
समाचारका कमेन्टले भावुक बनायो
आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही रुपमा निभाएका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताउने कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक भएपछि लोडसेडिङ हट्छ भन्दा मानिसहरु भावुक भएको र विभिन्न अनलाइन र समाचारहरुमा भावुक कमेन्टहरु गरेको उनी बताउँछन् ।
‘मानिसहरुबाट यति धेरै सेन्टिमेन्ट आयो कि मैले पछि मानिसहरुमा लोडसेडिङले पारेको प्रभाव पछि मात्र थाहा पाएँ ’ उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर लोडसेडिङ हटाउन कम्मर कसेपछि धेरैले कुलमानमाथि भरोसा देखाए ।
उनको देवत्वकरण भयो । जसलाई स्वयं कुलमान स्वीकार गर्छन् । त्यसले गर्दा आफूमाथि थप जिम्मेवारी र चुनौतीको महशुस भएको उनी बताउँछन् ।
‘विजुली बलेपछि आम मानिसले देवत्वकरण गरेको जस्तो भयो । त्यसले हामीलाई थप च्यालेन्ज दियो’ उनले भने,‘कतै केही कमजोरी र गल्ती भयो भने भनेको जस्तो लाग्न थाल्यो र थप जिम्मेजवारीपूर्वक काम गरेका थियौं ।’
‘पीसीआर टेस्ट गर्न गएको थिएँ । त्यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्नेहरु बाहिर आएर फोटो खिच्न थाल्नु भयो । त्यस्तो बेलामा पनि सम्मान दिनुभएको छ’ उनले भने ।
काम गर्नेलाई नेपालीको सपोर्ट
आफूले कुनै मिराकल गरेको नभइ भएका स्रोतलाई प्रयोग गरेको बताउँने कुलमानलाई मानिसहरुले आफूलाई गरेको समर्थनले बेलाबेलामा भावुक बनाउँछ ।
आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई सही रुपमा निर्वाह गर्ने हो भने त्यसबाट नतिजा आउने र मानिसहरुले साथ पाइने उनी बताउँछन् ।
‘जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्र्दा पव्लिकबाट सपोर्ट पाइन्छ’ उनले भने,‘नेपाली विकास निर्माणमा, देश परिवर्तन होस् भन्नेमा कति भावुक छन् भन्ने देखिन्छ । हामीले धेरै ठूलो काम गरेको होइन । विजुली दिएको हो । गर्नुपर्ने काम गर्दा यस्तो छ भने सबै हुँदा के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
वास्तबमा नेपालमा धेरै काम नभएका कारण केही काम भएमात्र पनि पव्लिक सेन्टिमेन्ट आउने गरेको हुनसक्ने उनी अनुमान गर्छन् ।
नेपालीको मायाले खुसी
आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा सबैले साथ र माया दिएकोमा घिसिङ खुसी छन् ।
कहिल्यै नभेटेको मानिसले आफ्नो समर्थनमा गीत गाएको र त्यस्ता गीत भाइरल बनेपछि कुलमान भावुक हुन्छन् । धेरै स्थानबाट आफू सम्मानीत हुन पाउँदा गर्वको महशुस भएको उनी बताउँछन् ।
‘एउटा कोठा सम्मानले भरिसक्यो, यो सबै हेर्दा कत्ति विकासको परिवर्तनको चाहनामा रहेछन् नेपाली भन्ने देखाउँछ’ उनी भन्छन् ।
आफू जहाँ गयो त्यहाँका नेपालीले माया दर्शाउने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘विदेशमा गयो भने विमानस्थलमा जम्मा हुनुहुन्छ ।जहाँ पुग्छु त्यहाँ जम्मा हुनुहुन्छ । फोटो त अब सामान्य भयो । मया दर्शाउनु हुन्छ’ उनले भने ।
कोरोना जाँचमा जाँदा समेत फोटो सेसन !
अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको महारमारी जारी रहेको छ । उपत्यकामा पछिल्लो दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेपछि कुलमान पनि कोरोना जाँचका लागि स्वाब दिन अस्पताल पुगेका थिए ।
सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएपनि मानिसहरु कुलमानलाई भेट्न र फोट खिच्न झुम्मिए ।
रोग लाग्ने डर र असहज परिस्थितिमा पनि मानिसहरुले आफूलाई देखाएको सद्भावदेखेर उनी भावुक बने ।
निरन्तरको घाटाबाट प्राधिकरणको नाफा
कुलमान आउनुपूर्व विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो । तर अहिले प्राधिकरण धेरै नाफा गर्ने संस्थामा परेको छ ।
कुनै समय प्राधिकरण यति धेरै घाटामा पुगेको थियो कि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था पनि थिएन । सरकारले कहिले दिन्छ र तलब खुवाउने भन्ने अवस्था थियो ।
‘ १५, १६ वर्षदेखि प्राधिकरण घाटामा थियो । कुनै बेला कर्मचारीले तलब खान पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो’ उनले भने,‘लगानीकर्तालाई पनि प्राधिकरणमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने चुनौती थियो ।’
प्राधिकरणको आर्थिक पाटो सुधार गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुले धेरै काम गरेको उनी बताउँछन् ।
‘खर्च कटौती तिर लाग्यौं । अन्य आम्दानीलाई बढायौं । घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा आयौं’ उनले भने ।
कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष २०७३,०७४ मा प्राधिकरणले एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो ।
आर्थिक वर्ष २०७४,०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५,०७६ मा करिब ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भयो ।
त्यसकै प्रतिफल स्वरुप चार वर्षमा प्राधिकरणले ब्याजसहित ३५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा भुक्तान गर्यो । र पाँच अर्ब सञ्चित नाफामा जम्मा गर्यो । घाटा संस्थानबाट प्राधिकरण बिगतका वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बनेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा धेरै काम बाँकी रहेकोले डाइनामिक व्यक्ति नेतृत्वमा चाहिने उनी बताउँछन् । उनी आफू नभइ प्राधिकरणमा केही हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्
आइतबार उनको कार्यकाल सकिँएको छ ।
धेरैले कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाएका छन् भने केहीले कुलमानलाई घाटामा रहेका वा रुगण बनेका स्थानमा लैजानुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
तर स्वयं कुलमान चाँही यसबारे के भन्छन् त ? यसबारे उनले केही समय अघि आफ्नो धारणा एक अन्तर्वार्ताका क्रममा राखेका थिए ।
कुलमान कार्यकाल थप गर्ने प्रशासनिक प्रकृया रहेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणमा धेरै काम बाँकी रहेकोले डाइनामिक व्यक्ति नेतृत्वमा चाहिने उनी बताउँछन् । उनले आफू नभइ प्राधिकरणमा केही हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए ।
‘प्राधिकरणमा धेरै काम छ । यी सबै काम गराउनलाई डाइनामिक लिडरसिप चाहिन्छ’ उनले भने‘मैले मात्र यो काम गर्न सक्छु भनेको होइन । सबैको सरसहयोग चाहिन्छ ।’
प्राधिकरणमा हिजोको भन्दा ठूलो जम्प गर्नुपर्ने बताउँदै उनले त्यसलाई सामना गर्नसक्ने नेतृत्वकर्ता आउनु पर्ने बताए ।
‘सबैले कुलमानले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहना आएको छ,उनले भने,‘मेरो मात्र चाहनाले हुँदैन सरकारको नियुक्त गर्ने कुरा हो ।’
आफू जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको कुलमान बताउँछन् । जस्तो सुकै जिम्मेवारी दिएपनि अपनत्व लिएर काम गर्ने र नतिजा दिने दाबी उनको छ ।
‘मलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा अपनत्व लिएर जिम्मेवारी पूरा गर्ने मान्छे हो । त्यसको मतलब मै हुनुपर्छ विकल्परहित चाँहि म भन्दिन । केही कुरा पनि निर्बिकल्प छैन ।’
प्राधिकरणमा आफूले बुझेको र त्यो भन्दा धेरै बुझेको मान्छे अरु पनि भएको बताउँदै उनले आफूलाई भने केही सहज अवस्था भएको बताउँछन् ।
‘म जत्किो बुझेको मानिस अरु पनि छन् तर मलाई अलि बढि सहजता छ । सबैको सपोर्ट पनि स्ट्रेन्थले पनि बढी रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने छ’ उनले भने ।
घिसिङले भने, मेरो लागि राइट प्लेस उर्जा क्षेत्र नै हो । यसको नशा नशा बुझ्छु , अरु क्षेत्रमा गयो भने त्यति बुझ्दिन होला । तर गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । वनरसिप लिएर काम गरो भने काम आउँछ । विज्ञ नै भयो भने रिजल्ट बढी आउँछ । क्षेत्रको एक्सपर्टिजका आधारमा नेतृत्वमा बस्यो भने रिजल्ट आउँछ । गलत नियत राख्यो भने नतिजा नआउने हो नत्र आउँछ ।’
के फेरि नियुक्ति पाउँलान् ?
आइतबारबाट कुलमान प्रधाकरणबाट बाहिरिएसँगै आम नागरिकले मन्त्रिपरिषद् बैठक कहिले बस्छ भन्दै कुरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पुन नियुक्ति गर्ने मानिसहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
कतिपयले सरकारले कुलमानको सट्टा अरुलाई नै नियुक्त गर्न त होइन भन्दै प्रश्न समेत गरिरहेका छन् । गर्ने नै भए पहिले नै निर्णय भइहाल्थ्यो नि भन्नेको संख्या पनि कम छैन ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने होडमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायत छन्। तर सर्वसाधरणले उनीहरुलाई भरोसा गर्न सकेको देखिएको छैन।
मानिसहरुले कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिए पुन अन्धकारमा बस्नु पर्ने हो कि भन्दै संशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले प्रधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई पुन नियुक्ति गर्ने गरि प्रस्ताव तयार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
उनलाई पुन नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भइसकेको समाचारहरुसमेत बाहिरिएका कारण मानिसहरु कुलमानको पुनर्नियुक्तिका विषयमा केही ढुक्क देखिएका छन् ।
तर कतिपयले ‘रात रहे अग्राख पलाउने’ भन्दै संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । आज वा भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
भारतले आजदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्दै